DF iyo dowlad goboleedyada oo si wadajir ah war uga soo saaray xaaladda dalka | Dalkaan.com
Home Warkii DF iyo dowlad goboleedyada oo si wadajir ah war uga soo saaray...
Muqdisho (dalkaan) – Dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa warsaxaafadeed ay soo saareen si wadajir ah uga hadlay arrimaha soo kordhay, gaar ahaan xaaladaha bani’aadanimo ee dalka.
Kulan ay isugu yimaadeen wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu gorfeeyey xaaladaha abaaraha, fatahaadaha iyo dhibaatooyinka kale ee bani’aadanimo ee ka jira gudaha dalkeena.
Sidoo kale wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboeed ayaa diiradda saaray, sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha haatan ka jira gudaha Soomaaliya
1. XAALADDAHA ABAARAHA IYO BIYA-YARIDA DALKA.
Sida aan la wada socono qeybo badan oo ka mid ah dalka waxaa saameyn ku yeeshay Biya-yarida baahsan taas oo sababtay inay Xoolaha macluul iyo haraad u dhintaan.
Deegaanada ay sida aadka ah u sameeysay Biya-yarida iyo Abaarta waxaa ka mid ah:- Jubbooyinka, Gedo, Mudug iyo Galgaduud.
In ku dhow 7.7-Milyan oo ruux ayaa wajahayo Cuna-yari daran taas oo ka dhalatay saameyntii ay reebeen Abaarihii, Fatahaadihii iyo Ayaxii saxaraha
ka yimid kaas oo galaaftay dalag badan islamarkaana baajiyay xilli badan oo ay dadka tabcan lahaayeen Beerahoodda.
Waxaa kale oo xaaladda sii cakiray faafida caabuqa COVID-19 iyadoo hirkii u dambeeyay uu saameeyay dhaqaallaha waxa uu sarakac ku keenay maciishada quutul-daruuriga ah.
Deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan tuullooyin ku dhow dhow Baledweyne iyo Jowhar waxaa saameyn ba’an ku yeeshay fatahaadihii kal hore ku dhuftay kuwaas oo sababay barakaca dad badan oo beeraleey ahaa oo aan beerahoodda tabcan xilli-roobeedyadii lasoo dhaafay taas oo keentay
In badan oo ka mid ah Haweenka, Caruurta iyo dadka da’da ah ayaa dhibtoonayo nafaqa-daro iyo macluul aad u daran oo ka dhallatay raadadkii xumaa ee isbeddelka cimiladda.
Hoos u dhaca wax soo saarka, qiimo kororka maciishada iyo biya-yarida ayaa weli sii kordhinayo macluusha.
Previous articleNew York Times: CIA ayaa is-hortaagtay cunaqabateyn la saari lahaa Fahad Yaasiin
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo sheegay waxa ay uga dhigan tahay doorashada Puntland
Abiy Ahmed oo ugu baaqay TPLF inay is-dhiibaan kadib ‘guulo ay gaareen’ ciidankiisa
Daafaca Chelsea Marcos Alonso ayaa lagu soo waramayaa inuu weli bartilmaameed u yahay kooxda Inter Milan . 30 jirkaan ayaa ku riyaaqay bilow...
Maxey isku hayaan jamaahiirta Xasan Sheekh, Kheyre, Shariif iyo CC Shakuur?
Guddiga xalinta khilaafaadka oo ka horyimid habraacii ay soo saareen Cabdi...
Saadaasha Paul Merson ee Premier League Kulamada 12aad Liverpool vs Arsenal,...